Iindaba-Ufuna ukufaka iRFID microchips RFID Tag kwisilo-qabane sakho?
Ngaba uyafuna ukufaka iRFID microchips RFID Tag kwisilo-qabane sakho?
Kutshanje, iJapan ikhuphe imimiselo: ukuqala ngoJuni ka-2022, iivenkile zezilwanyana zasekhaya kufuneka zifakele iitshiphusi ze-microelectronic zezilwanyana zasekhaya ezithengiswayo. Ngaphambili, iJapan ibifuna iikati nezinja ezisuka kumazwe angaphandle ukuba zisebenzise iimicrochips. Kwangoko ngo-Oktobha odlulileyo, i-Shenzhen, e-China, iphumeze "iMimiselo ye-Shenzhen yokufakelwa kweTag ye-Electronic for Dogs (Trial)", kwaye zonke izinja ezingenazo i-chip implants ziya kuthathwa njengezinja ezingavumelekanga. Ukusukela ekupheleni kwalo nyaka uphelileyo, iShenzhen ifumene ukhuseleko olupheleleyo lolawulo lwetshiphu yenja.
Imbali yesicelo kunye nemo yangoku yeechips zezinto zesilwanyana. Enyanisweni, ukusetyenziswa kweemicrochips kwizilwanyana kuyinto eqhelekileyo. Ukufuywa kwezilwanyana kusetyenziselwa ukurekhoda ulwazi lwezilwanyana. Izazi ngezilwanyana zityala iimicrochips kwizilwanyana zasendle ezinjengeentlanzi kunye neentaka ngeenjongo zesayensi. Uphando, kunye nokulufakela kwizilo-qabane kunokuthintela izilwanyana zasekhaya ukuba zingalahleki. Okwangoku, amazwe ehlabathini lonke anemigangatho eyahlukeneyo yokusetyenziswa kwe-RFID pet microchips tag: I-France yachaza ngo-1999 ukuba izinja ezingaphezu kweenyanga ezine kufuneka zitofwe nge-microchips, kwaye ngo-2019, ukusetyenziswa kwe-microchips kwiikati kunyanzelekile; I-New Zealand ifuna ukuba izinja zezilwanyana zifakwe kwi-2006. Ngo-Aprili 2016, i-United Kingdom yafuna ukuba zonke izinja zifakwe kwi-microchips; I-Chile iphumeze uMthetho weTyala lobunini bezilwanyana zasekhaya ngo-2019, kwaye phantse isigidi seekati kunye nezinja zafakwa kwi-microchips.
Itekhnoloji yeRFID elingana neenkozo zerayisi
I-rfid pet chip ayilona uhlobo lwezinto ezibukhali-ezifana nephepha ezicingelwa ngabantu abaninzi (njengoko kubonisiwe kuMfanekiso 1), kodwa imilo yecylindrical efana nerayisi ende yeenkozo, enokuba yincinci njenge-2 mm ububanzi kunye ne-10. mm ubude (njengoko kubonisiwe kuMfanekiso 2). . Le ncinane "ingqolowa yerayisi" i-tag isebenzisa i-RFID (i-Radio Frequency Identification Technology), kwaye ulwazi olungaphakathi lunokufundwa "kwi-reader" ethile (Umfanekiso 3).
Ngokukodwa, xa i-chip ifakwe, ikhowudi ye-ID equlethwe kuyo kunye nolwazi lwesazisi somfuyi luya kubotshwa kwaye lugcinwe kwi-database yesibhedlele sesilwanyana okanye umbutho wokuhlangula. Xa umfundi esetyenziselwa ukuva isilwanyana esiphethe i-chip, sifunde Isixhobo siya kufumana ikhowudi ye-ID kwaye singenise ikhowudi kwisiseko sedatha ukwazi umnini ohambelanayo.
Kusekho indawo eninzi yophuhliso kwimarike yezilwanyana ezifuywayo
NgokwePhepha leNgcaciso yoMzinzi weSilwanyana ka-2020, inani lezinja kunye neekati ezizifuywayo kwiindawo zasezidolophini zaseTshayina lidlule kwi-100 lezigidi kulo nyaka uphelileyo, lafikelela kwi-10.84 yezigidi. Ngokunyuka okuqhubekayo komvuzo womntu ngamnye nokwanda kweemfuno ezingokweemvakalelo zolutsha, kuqikelelwa ukuba ngowama-2024, iTshayina iya kuba nekati nezinja ezizizigidi ezingama-248.
Inkampani yokubonisana nentengiso uFrost & Sullivan uxele ukuba ngo-2019, bekukho iithegi zezilwanyana ezizizigidi ezingama-50, apho ezizigidi ezili-15 bezizizigidi ezingama-50. I-RFID iithegi ityhubhu yeglasi, Izigidi ezi-3 zamakhonkco eenyawo zamahobe, kwaye ezinye yayiziithegi zendlebe. Ngo-2019, isikali sentengiso yethegi yezilwanyana ye-RFID ifikelele kwi-207.1 yezigidi zeeyuan, ibalelwa kwi-10.9% yemarike ye-RFID ephantsi.
Ukufakela iimicrochips kwizilwanyana zasekhaya akubuhlungu kwaye akubizi
I-pet microchip implantation method is injection subcutaneous, ngokuqhelekileyo kumqolo ongaphezulu wentamo, apho iintlungu zentlungu zingaphuhliswanga, akukho anesthesia iyadingeka, kwaye iikati kunye nezinja aziyi kuba buhlungu kakhulu. Ngokwenyani, uninzi lwabanini bezilwanyana zasekhaya baya kukhetha ukutshabalalisa izilwanyana zabo. Faka i-chip kwisilwanyana sasekhaya ngexesha elifanayo, ngoko ke isilwanyana asiyi kuva nantoni na kwinaliti.
Kwinkqubo yokufakelwa kwe-pet chip, nangona inaliti yesirinji inkulu kakhulu, inkqubo ye-siliconization inxulumene nemveliso yezonyango kunye nempilo kunye nemveliso yebhubhoratri, enokunciphisa ukuxhathisa kunye nokwenza iinaliti zibe lula. Ngokwenyani, iziphumo ebezingalindelekanga zokutyala iimicrochips kwizilwanyana zasekhaya zinokuba kukopha okwethutyana kunye nokulahleka kweenwele.
Okwangoku, umrhumo wokufakelwa kwe-microchip yesilwanyana sasekhaya ungaphakathi kwe-yuan ezingama-200. Ubomi benkonzo bude beminyaka engama-20, oko kukuthi, phantsi kweemeko eziqhelekileyo, isilwanyana sidinga kuphela ukufaka i-chip kanye ebomini bakhe.
Ukongezelela, i-pet microchip ayinayo umsebenzi wokumisa, kodwa idlala indima yokurekhoda ulwazi, olunokunyusa amathuba okufumana ikati okanye inja elahlekileyo. Ukuba umsebenzi wokumisa uyafuneka, ikhola yeGPS inokuqwalaselwa. Kodwa nokuba ihamba ikati okanye inja, intambo yintambo yokuphila.
Ixesha lokuposa: Jan-06-2022